10 zvitsva zvakavanzika maficha eMacOS Sierra | Ndinobva mac
10 zvitsva zvakavanzika mumacOS Sierra
Muvhuro wapfuura isu takazobvisa kusahadzika uye isu taigona kuona ese mitsva mabasa ayo vachasvika mune yavo yekupedzisira vhezheni paMacs edu munaGunyana. Nepo vanogadzira vatove kuyedza beta yekutanga yeMacOS Sierra kuti vatange kuchinjisa mashandisiro avo pamwe nekumhan'ara chero kugadzikana kana nyaya dzekuita dzavanosangana nadzo zuva nezuva.
Iwo makuru ekutanga ayo macOS Sierra atiunzira anogona kuwanikwa muSiri, Auto Unlock kuvhura iyo Mac neApple Watch yedu, yepasirese clipboard, iyo meseji application, Mufananidzo-mu-Mufananidzo kutumidza mamwe emhando dzinoyevedza, Asi havazi ivo vega Iwe uchagamuchira iyo nyowani vhezheni ye macOS Sierra.
1 Chii Chitsva muMacOS Sierra
1.1 Nyowani faira system Apple File Sisitimu
1.2 RAID rutsigiro
1.3 Disk Magetsi inogona kudzoreredzwa
1.4 Kugadziridza nzvimbo
1.5 Hapana sarudzo yekuisa maapplication kubva kunze kweMac App Store
1.6 Anoti kunyorera
1.7 Safari yekuwedzera inowanikwa pane Mac App Store
1.9 Musoro mutsva webara rekuzivisa
Chii Chitsva muMacOS Sierra
Nyowani faira system Apple File Sisitimu
Iyi nyowani faira system zvichareva shanduko huru kune vese vashandisi munguva yepakati. Iyo nyowani faira sisitimu yemadhisiki kambani iri kushanda pakuvandudza iyo HFS + iyo yanga ichishanda kwemakore angangoita makumi matatu.
Kuuya kweOS X El Capitan zvaireva kubviswa kwerutsigiro RAID, sarudzo yakatsamwisa vazhinji vashandisi veMac.Nekuuya kweMacOS Sierra, rutsigiro RAID runodzokera kuOS X zvakare.
Disk Magetsi inogona kudzoreredzwa
Chero chikonzero chipi zvacho, kungave nekukanganisa kana nekugadzirwa, iyo Disk Utility hwindo muOS X El Capitan haigone kudzikiswa izvo zvinotadzisa basa kana isu tiine akaomarara akaomarara akabatana neMac.Neraki, neMacOS Sierra dambudziko iri rakagadziriswa.
Mune yakakosha hurukuro, isu taigona kuona vhidhiyo matinoona sei MacOS Sierra inogadzirisa kuchengetedza kweMac yedu. Mune demo takaona kuti yakwanisa sei kusunungura inopfuura 100 GB yenzvimbo, nekungodzima mafaera ekare asisiri madikanwa uye nekufambisa akakosha magwaro kune iro gore. Apple haitauri chero nguva kuti ndeapi mafaira akakanganiswa nebasa iri.
Asi kuti ishandise mashiripiti ayo, iyo yekuchengetedza ficha ichafanirwa kugadzira kopi yeese ekare maemail attachments, maspredishiti, iTunes mafirimu atakaona, ekare mifananidzo, RAW mafaera, iTunes U makosi atisingashandise, nziyo kubva iTunes. .. Huya, zvinogona kunge zviri dambudziko kupfuura mhinduro, sezvo sekutonga kwese, vashandisi vanoziva ruzivo rwatakachengeta paMac yedu uye kana zviripo ndezvechimwe chinhu.
Hapana sarudzo yekuisa maapplication kubva kunze kweMac App Store
Iri rinogona kunge riri dambudziko rakakomba uye inotevera macOS Sierra betas haibvumidze kuiswa kwezvikumbiro zvinotorwa kubva kune chero webhusaiti. Iyo chete sarudzo yainotipa Muchengeti weGate ndeyekuisa maapplication akatorwa kubva kuMac App Store. Vazhinji vanga vari vagadziri avo mumwedzi yapfuura vakasiya chitoro cheApple cheMac kuti vazvimisikidze vega, asi kana chinangwa cheApple ndechekuti vadzoke nesarudzo iyi, kambani iri kutsauka sezvo ichizokanganisa zvakanyanya kune vashandisi kupfuura vanogadzira .
Tinogona seta font uye saizi default mavara.
Safari yekuwedzera inowanikwa pane Mac App Store
Nekusvika kweSierra, Apple ichagadzira chikamu chitsva pane Mac App Store yekuwedzera, panzvimbo yekuenda kune imwe peji rewebhu kwatinogona kuiwana sepakutanga.
Yegumi vhezheni yeSafari inotipa mabhukumaki zvigunwe iyo yatakachengetera mubharaki rebasa pamwe nekuona kwekuverenga kwawana kugadziriswa kwekunaka. Kana isu tiri kushandisa Safari mune yakazara skrini, kana uchivhura nyowani tebhu otomatiki iyo Split View basa ichaitwa, iyo yakauya gore rapfuura kubva paruoko rwaEl Capitan.
Musoro mutsva webara rekuzivisa
Iyo yekuzivisa bar inowana chena theme, panzvimbo yeiyo yerima iyo yataive nayo naEl Capitan.
macOS Sierra ichauya nayo iTunes 12.5 ine redesigned interface, kunyanya iyo yeApple Music sevhisi.
Parizvino macOS iri mubeta rekutanga, saka zvingangoita kuti mamwe emabasa atakakurukura muchinyorwa chino pIvo vanogona kutambura kumwe kusiana panguva yekuvandudza macOS Sierra. Haizove nguva yekutanga iyo Apple inotiratidza rimwe basa iro gare gare risingasvike iyo yekupedzisira vhezheni. Kana zvirizvo, kubva kuSoy de Mac isu tinokuzivisa iwe nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » 10 zvitsva zvakavanzika mumacOS Sierra
MuCapitan kana ichigona kuiswa muRaid nekubiridzira zvishoma, zvinondishandira. Kurwiswa kunogadzirwa kubva pasystem pamberi paEl Capitan, mune yangu Maveriks uyezve kuisirwa El Capitan kunoitwa kubva muUSB mune iro raid yakagadzirwa kare. Zvese zviri kufamba mushe kunze kwekuvandudzwa, uko kwazvinopa kukanganisa uye zvisina kuiswa, mhinduro ndeye kudzokorora maitiro apfuura neshanduro nyowani.
Rutsigiro rwevamiriri vemakadhi emifananidzo ekunze anosvikawo ne macOS Sierra